HALKAAN KA AKHRISO:- WARGEYSKA M. TIMES EE MAANTA OO AH ISNIIN 29-KA NOVEMBAR 2021-KA
Monday November 29, 2021 - 08:48:46 in Wararka by Mogadishu Times
RW Rooble Oo Ballan Qaad U Sameeyay M/ Musharixiinta, Ka dib Kulankii Shalay
Kulan ay Shalay isugu yimaadeen Ra’iisul Wasaaraha XFS iyo Xubnaha Midowga Musha raxiinta ayaa wax ay uga wada hadleen arimaha doorashooyinka dalka .
M/Musharaxiinta ayaa walaac weyn ka muuj iyay daahfurnaan la’aanta ka jirta doorashooyinka dalka ka soconaya iyo sida aaney raali uga noqon karin habka ay iminka wax u socdaan.
R/ Wasaaraha ayaa Madaxda Musharaxiinta uga warbixiyay dadaalkiisa joogtada ah ee la xariira xaqiijinta hufnaanta doorashada waxa uuna la wadaagay inuu faray Guddiyada doorashada in ay waajiboodkooda u gutaan si waafaqsan habr aacyadii lagu hishiiyay ee doorashooyinka.
R/Wasaaraha isaga oo tixgalinaya tabashooy inka la xiriira daahfurnaanta doorashooyinkaee ay muujiyeen Midowga Musharaxiinta ,dareenka shacabka Soomaaliyeed iyo Bulshada Caalamk a ayaa waxa uu ballan qaaday in G/Wadatashi ga Qaranka uu yeelan doono kulan ku saabsan sidii si wadajir ah looga shaqeyn lahaa in doora shooyinka dalku ay u dhacaan si hufan loona saxi lahaa qaladaadka jira.
R/Wasaaraha ayaa sheegay in Guddiyada Doorashooyinka heer D/Goboleed & heer Feder aal uu u qabanayo sidoo kale shir foogaan arag ah kaas oo lagaga hadlaayo daahfurnaata door ashada isaga oo caddeeyay in lala xisabtamaayo cid kasta oo ku xadgudubta hufnaanta doora shada.
D/F/Soomaaliya oo qorsh eynaysa inay doora shada ka soo wareejiso M/Beledweyne
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa qor sheynsaysa in doorashada laga soo wareejiyo M/ Beledweyne laguna qabto Caasimadda Muqdi sho gaar ahaan dugsiga tab abarka Booliska Soomaali yeed sida ay HOL ugu wa rameen ilo xog-ogaal ah oo ka tirsan Xafiisyada Sare ee dowladda.
Sida aan xogta ku helnay qorshahan kuma ko obna in doorashada laga soo wareejiyo M/ Beledweyne, waxaase qeyb ka ah in doorashada ka dhici lahayd gobolka Gedo iyadna loo soo war eejiyo Caasimadda Muqdisho
Hirshabeelle ayaa kuraasta G/Shacabka loo asteeyay in 25 kursi doorashadooda lagu qabto Beledweyne halka Jowhar 13 kursi lagu qabana yo oo isku geyn ah 38 Kursi. Gobolka Gedo, M/ Garbahaareey ayaa iyadna hore loogu asteeyay inay ka dhacdo doorashada 16 kursi oo ka mid ah kuraasta yaala dowlad goboleedka Jubaland.
Sida aan xogta ku helnay iskudaygan ay dowl addu damacsantahay inay doorashada uga soo wareejiso magaalada Beledweyne ayay sabab uga dhigayaan ineysan suurtagal aheyn in doora sho ka dhacdo M/Beledweyne iyagoo sheegay in loo diiday inuu tago Madaxweynaha Hirshabelle M/Beledweyne oo ay sheegeen inay mas’uuliyadi Isa ka mid tahay qabashada doorashada si la mid ah midii Aqalka Sare ee lagu soo gaba-gab eeyay M/Jowhar. Hase yeeshee doodan mid ka duwan waxaa qaba siyaasiyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ka soo jeeda gobolka Hiiraan kuwaas oo ku adkeysanaya iney doorashadu ka dhacdo magaalada Beledweyne.
Xogta ayaa sidoo kale tibaaxeysa in xubno ka tirsan beesha caalamka kuwooda ka howlgala Muqdisho ay dowladu la wadaagtay ineysan suur tagal aheyn doorasho in ay ka dhacdo M/Beledw eyne haddii aanu madaxweynihii D/G/Hirshabelle tagi karin mid ka mid ah 2dii deegaan ee loo as teeyay inay ka dhacaan doorashooyinka. Balse sida ku cad heshiiskii 17-kii Sibteembar, 2020, & midkii 27 May, 2021 ayaa 2duba dhigaya in doo rashada xubnaha baarlamaanka Aqal ka Hoose ay ka dhacdo 2 deegaan oo ka mid ah D/Gbole ed kasta ee hore loogu astee yay.
Tan iyo markii madaxweyne loogu doortay Ca li Guudlaawe magaalada Jowhar oo hore madax weyne ku xigeen ugu ahaa maamulkaas 2dii ma daxweyne ee ka horeeyay oo ka soo jeeday G/ Hiiraan, ayaa kacdoon ka dhan ah Hirshabelle ka bilowday degaamo ka tirsan Hii raan oo uu hor kacayo Jeneraal Abuukar Xaaji Warsame Xuud kuwaas oo diidan hanaanka saa mi qeybsi ee D/ G/Hirshabelle ku dhisantahay, iyagoo ku dooda ya in G/Sh/dhexe isku darsaday caasimadii iyo xi lalka kale ee ugu sareeya D/G/Hirshabelle oo uu ku jiro midka madaxweynaha.
Qorshahan cusub ee wali socda ee Dowlad du damacsantahay inay degaan doorasho ku be desho wuxuu ku soo beegmayaa xilli ay taba shooyin farabadan ka soo baxayaan boob iyo ku shubasho la sheegay in loo geystay kuraasta qa ar lagu soo doortay DG/yedyada Galmudug & K/ Galbeed, kuwaas oo midowga musharixiinta ay sheegeen in hanaanka doorasho ee kuraastaas loo maray ay diidanyihiin, iyagoo ku goodiyey in ay ka ta shanayaan haddii aan wax laga qaban tabashooda.
Lama oga sida uu ku hirgali doono qorshahan cusub ee dowladda, iyadoo uun bartamihii bish an agabka codbixinta doorashada kuraasta Gol aha Shacabka la gaarsiiyay M/Beledweyne.
Xubno ka tirsan DFS & dowlad Goboleedy ada oo shir uga furmay Kismaayo
M/Kismaayo ee G/J/Hoose ayaa waxaa Shal ay ka furmay Shirka Waxbrashada Dalka, kasoo oo lagu gorfeyn doono Horumarinta Manhajka Waxbarasha da Iyo Hannaanka Imtixaa naad ka Dalka.
SHirka waxaa goobjoog ka ah Wasaaradaha Waxbarashada Federaalka, dhammaan Maamul Goboleedyada dalka iyo G/ Banaadir. Shirka oo socon doona muddo 3 Cisho ah ayaa waxaa Madaxda ay diirada ku saarayaan daadajinta Adeegyada Waxbarasha da iyo xoojinta taya-dhowrka Waxbarashada.
Shirkaan ayaa waxaa uu noqonayaa shirkii 2aad oo ay yeesheen Xubno ka socda Wasaara daha waxbarashada DFS & D/Goboleedyada, wa xanaa geba-gabadiisa laga soo saari doonaa Warmurtiyeed ku saabsan waxyaabihii ay ku he shiiyeen.
Midowga Musharaxiinta oo faahfaahiyay waxyaa bihii ay kala hadleen Rooble
Golaha Midowga Musharaxiinta xilka Madax weynaha Soomaaliya oo Shalay kulan la yeesh ay R/wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa kala hadlay boobka ka taagan doo rashada xildhibaanada G/Sh/B/ S. oo bulshada Soomaaliyeed ay Cabasho xoog leh ka muujiyeen.
Afhayeenka Midowga Musharax iinta Daahir Maxamuud Geelle ayaa sheegay in ay go’aansa deen in R/wasaaraha Soomaaliya ay siiyaan fursad uu ku saxo khalaadaadkii baahsa naa ee ka dhacay doorashada Xildhibaanada G/Shacabka. Musharax Md.Daahir waxaa uu cad deeyay in M/Musharaxiinta aysan marnaba ku qa nci doonin wixii dhacay iyo dadkii loo diiday xaqii ay u laahaayeen in ay wax doortaan iyagana la doorto ilaa ay ka helayaan Caddaalad buuxda.
"Qof kasta oo dulmana ah waa inuu caddaala d helaa caddaaladdaasna waxay ku imaaneysaa in la saxo falaadkii iyo hannaankii qaawanaa ee boobka lagu sameeyay doorashooyinka, waxaan rabnaa inaa R/Wasaaraha fursad u siino inuu la kulmo G/Wadatashiga Qaran si wax loo saxo ”Ay uu yiri Dahir Maxamuud Gelle.
Waxaa uu sidoo kale sheegay in ay sii wadi doonaan kulamada ay la yeelanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada si looga hadlo badbaa dinta dalka. R/wasaaraha Soomaaliya Md. Roob le ayaa dhankiisa Shalay Caddeeyay inuu qirsan yahay in boob loo geystay kuraas ka mid ah gola ha Shacabka.
Midowga Musharaxiinta ayaa ka dalbaday R/ Wasaare Rooble inuu joojiyo doorashada G/ Sha cabka oo ay ku tilmaameen in hannaanka loo ma rayo ay tahay mid boob ah, illaa haddana doora shooyinka dhacay aanay aheyn kuwo daah furn aa.
Markabkii Ugu Horreeyey Oo Shalay Kusoo Xirtey Dekedda Garacad
Waxaa oo Shalay Axad Aheyd Dekadda cus ub Garacad ee G/ Mudug ee Maamulka Puntland ku soo xirtay Markabkii ugu horeeyay oo sida Shixnad qalab ah, kaasi oo sida aan xogta ku helnay kasoo shareecday Dubai.
Markabkaan oo ah nooca xamuulka qaado ah ayaa si da Shixnad qalab ah oo isu gu jirta qalab loo gu tala-gal ay in lagu dhameystiro dhimaha Dekedda Garac ad iyo gaadiid nooca Soomaalida u taqaano Qoo qanta.
Dekadda ayaa waxaa ku sugan Wasiiro, Xil dhibaano iyo Mas’uuliyiin kala duwan oo ka so cda Maamulka Puntland, kuwaasi oo ka qeyb ga laya madasha xariga looga jarayo soo dejinta Shixnada uu sido Markabka Shalay kusoo xirtay dekadda cusub ee Garacad.
Sidoo kale Dekadda waxaa ayaa ku sugan Guddoomiyeyaal Degmo, Ganacsato, qurbojoog iyo xubno kale, waxaana Maamulka dekadda ay sheegeen in Markabka si wanaagsan ugu soo xir tay Dekadda, kaasi oo kasoo shareecday Dubai. Dekedda Garacad ee Gobolka Mudug ee Puntla nd oo uu dhismaheedu soo bilowday sanadkii 20 18-kii ayaa dhowaan la dhameystiray qeyb dhee g-saarka 1-aad ee ugu muhiimsan ay maraakiib tu soo galaan.
Dekedda Garacad ayaana noqonaysa Deke ddii labaad ee yeelato Puntland, waxaana Dhis maha Dekedda uu yahay mashruuca ugu weyn ee ka socda guud ahaan Soomaaliya, iyadoo dhaqaalaha ku baxay iska leh ganacsato Soom
aaliyeed oo u badan reer Puntland.
Afar kamid ah Golaha Shacabka oo Shalay lagu doortay Baydhabo
Shalay waxaa Magaalada Baydhabo ka dha cday doorashada Afar kamid ah kuraasta Golaha Suacabka oo uu kujiro kursiga HOP103 oo horay ugu fadhiyay guddoomiyihii hore ee Golaha Sha cabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Kursiga koowaad ee HOP103 ayaa waxaa ku guuleystay Maxamed Cali Xasan oo ah Wasiirka howlaha Guud & Guryeynta Koonfur Galbeed oo helay Codad dhan 78 halka musharaxii la tartam ayey ee mukhtar Cali Ibraahim uu heley Codad 18 Cod, waxaana halaabay 4 Cod.
Kursigaan HOP-103 ayaa guddiga doorasho oyinka Heer Federaal ayaa ku dhawaaqeen inay hakiyeen doorashadiisa, balse Guddiga doora shooyinka Heer dowlad Goboleed ay sheegeen in uusan jirin wac dacwo ah oo ka timid sidaasina Shalay doorashadiisa ku qabteen, xilli Guddoom iyihii hore ee Golaha Shacabka Maxamed Cism aan Jawaari uu sheegay in loo diiday in uu u tar tamo.
Kursiga labaad ee Hop 189 ayaa waxaa ku ta rtamay Gudoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Sh.Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) oo kursiga an horay ugu fadhiyay & Xasan Cali Maxamed, balse waxaa kursiga ku guuleystay Gudoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Sheekh Aadan Max amed Nuur (Madoobe) oo helay 63 Cod Halka musharaxii la tartamayey ee Xasan Cali Maxam ed uu heley Codad dhan 11.
Kursiga 3aad ee Hop 042 oo ay horay ugu fa dhisay Hani Maxamed Aadan, balse meesha la ga saaray ayaa waxaa ku tartamay Cabdirisaaq Xaaji Cabdi (Midnimo) & Maxamed Cali Sheekh, waxaana kursiga ku guuleystay Cabdirisaaq Xa aji Cabdi (Midnimo) oo helay 80 Cod halka mu sharrixii la tartamayey ee Maxamed Cali Sheekh uu helay Codad dhan 15-cod
Kursigii ugu dambeeyay ee doorashada Sha lay ee HOP041 oo uu ku fadhiyay Idiris Cabdi Dhaqtar , laakin meesha laga saaray ayaa wax aa ku tartamay Nuura Mustaf Muqtaar & Muno Aasan Maxamed, waxaana kursiga ku guuleysat ay Nuura Mustaf Muqtaar oo heshay Codad dhan 83-cod halka musharaxii la tartamaysay Muno Aadan Maxamed ay heshay Codad dhan 15-cod, waxaana halaabay laba Cod.
Sidoo kale dhawaan ayaa waxaa la filayaa in M/ Baydhabo lagu qabto doorashada Afar kursi oo ka harsan 11 kursi oo guddiga doorashooyin ka heer Guddiga Doorashooyinka ay dhawaan sheegeen in doorashadooda la qabanayo.
War qoraal ah oo uu soo saaray 26-kii Nofeem bar, Xoghayaha Guud ee Q/Midoobay, António Guterres, ayaa waxaa uu si adag u cam baareey ay weer arkii khamiistii aynu soo dhaafn ay ka dhacay M/M uqdisho. Xoghayaha Guud ee QM ayaa si adag u cambaareeyey weerarka, oo uu ku tilmaamay inuu ahaa mid argagixiso, kaa si gallaaftay no losha dad bad an, waxaana lala beeg saday kol onyada ka tirsan Q/Midoobay, oo mara yay ka soo horjeedka Dug siga Mucaasir ee magaalada Muqdisho, kaas oo dhaliyey waxyeello badan. Xog-hayaha Guud waxa uu tacsi tiiraanyo leh u diray qoysaska dadki geeriyooday waxa uuna caafimaad degdeg ah u rajaynayaa kuwo ku dha awacmay. Waxa uu ugu baaqay mas’uuliyiinta Soomaaliyeed in ay caddaalada hor keenaan ku wi ka dambeeyey weerarka.
Xog-hayaha Guud waxa uu intaa ku daray in uu taageero iyo garab-istaagga Qaramada Midooba y u muujinayaa Dowladda iyo Shacabka Soomaa liyeed dagaalka ay kula jiraanw waxa ay ugu yee raan Argagixisada. War-saxaafadeedkan waxaa 26-ki Nofeembar 2021 soo saaray Af-hayeenka Xog-hayaha Guud ee QM
Ciidamada Booliska Soomaaliya ee ka ho wlgalla degmada Waajid ee Gobolka Bakool ay aa waxaa ay soo bandhigeen Saddex Xubnood oo ka tirsanaa Ururka Al-Shabaab, balse isku soo dhiibay Ciidamada iyo Maamulka degmad aasi Waajid.
3da Xubnood oo dhamaantood dhalinyaro ah ayaa lagu kala magacaabaa Ca bdirisaaq Ibraahim Isaaq, Xasan Maxamed Suuboow iyo Cabdullaa hi Ibraahim Goronyo, waxaana ay sheegeen in duruufo farabadan oo jira aawgood ay isaga soo baxeen Ururka Al-Sha baab oo ay ka tirsanaayeen.
Taliska Booliska degmada Waajid ayaa wax aa ay sheegeen in raggaan ay ka qeyb qaateen dagaalo ka kala dhacay, Awdheegle, Cumar Ba riir, laanta Buure iyo degaano ka tirsan Gobolka Bakool ee Maamulka Koonfur Galbeed.
Taliyaha Saldhiga Booliska degmada Waajid ee G/Bakool ayaa sheegay in dhalinyaradaan sa babaha ay uga soo baxeen Al-Shabaab ay tahay inay dhibaatooyin farabadan ku hayaan Shacab ka Soomaaliyeed, isla markaana ay soo dhawe eynayaan cid kasta oo kasoo tageeysa.
Waxaa uu hadalkiisa intaasi ku daray in rag aan ay Gobolo kale uga soo Shaqeeyeen Al-Sha baab, balse markii dambe Gobolka Bakool loo ke enay inay kordhiyaan Go’doonka ay Al-Shabaab ku hayaan degmooyinka Gobolkaas.
Bilihii la soo dhaafay ayaa waxaa ku kordhay degaannada Koonfur Galbeed Xubnaha ka tirsan Ururka Al-Shabaab ee isku soo dhiibaya Ciidama da DFS iyo kuwa Maamulka K/ Galbeed.
Askar Ka Tirsan Ciidanka Daraawiishta Puntl and Oo Ku Biiray Ciidamada PSF
Saraakiisha Ciidamada hay’adda PSF ayaa Shalay soo Bandhigay Ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa daraawiishta Puntland oo ay sheeg een inay ka goosteen dhinaca Maamulka Puntl and, waxaana Ciidankaas ay tiro ahaan gaaraya an 86 Askari.
Sarkaal u hadlay Ciidamada ku biiray hay’ad da PSF ayaa u sheegay inay kamid ahaayeen ku wa daraawiishta Puntland, isla markaana ay u soo wareegeen dhinaca PSF, wuxuuna sheegay Inay yihiin Askar tiro ahaan dhan Askari 86, kana soo baxay furimaha hore.
Waxaa uu Carabka ku dhuf tay Sarkaalka in la doonayay inay dagaal la gala an kuwa P SF oo ay isku difaac ugu jire en kooxaha kasoo horjeeda Puntland, isla mark aana arrintaas kasoo horjeedan, taasina ay keen tay inay iyaga ku biiraan.
Tallaabadan ayaa ku soo aadaya xilli saacado ka hor Duqa Magaalada Boosaaso uu sheegay in Ciidanka PSF ay laba Shalay kala noqdeen ga rab kamid ah ku biiray dhinaca Agaasimaha cus ub Amiin Cabdullaahi Xaaji Khayr halka garabkii kale weli la joogaan Agaasime Maxamuud Cisma an Diyaano.
Guddiga xallinta Khilaafaaadka oo hakiyay xildhibaaninimada loo doortay Yaasiin Farey.
Guddiga xallinta Khilaafaaadka Doorashada Dadban ayaa shaaciyay, iyaga oo fulinaya Hab raaca lagu dhisay Guddiga ee soo baxay I-dii Okt oober 2020 uu ku wargalinayo Gud diga Hirgal in ta Doorasho oyinka Heer Federal in dacwad laga ke enay Kursi Lumber HOP#067.
Kursigaan ayaa maalmihii la soo dhaafay, iy ada oo dood ka taagan tahay lagu doortay M/ Dhu usamareeb, waxaana ku soo bax ay Aga asimaha KMG ah ee Hay’adda NISA Ya asiin Ca bdullaahi Farey .
Qoraal ka soo baxay Guddiga xalinta khilaafa adka doorashooyinka ayaa lagu wargeliyay gu ddiga doorashooyinka Heer Federaal in la hakiyo natiijada ku dhawaaqista rasmiga ah ee Kursiga HOP#067 laga bilaabo 28/11/2021 ilaa inta go’ aan ay ka gaarayaan guddiga xalinta khilaafaadk a dacwadda laga soo gudbiyay kursiga.
Sidoo kale Guddigu waxaa ay sheegeen in baarintaanka cadaymaha, dhagaysiga dhinacya da ay khusayso dacwadu, iyo ga’aan ka gaarista dacwada ku dhamaystiri doonaan muddo todobo (7) maalmood gudahood ah oo ka bilaabanaysa 28/11/2021 Waxayna go’aanka ugu gudbin doo naa soo dacwoodayaasha iyo dhamaan dhinac yada ay Khuseyso muddo afar iyo labaatan saac adood (24) gudahood ah oo ka bilaabanaya mar ka go ‘aanka la gaaro.
Federaal (GHDHF) iyo Guddiga Maamulka Door ashooyinka ee Galmudug in ay si dhaw
shaqeeyaan xubnaha Guddiga xalinta khilaa faadka ee dacwadan gacanta ku haya si loo helo xog dhameystirsan isla markaana dhawraan waqtiyada dhagaysiga dacwada ee lagu qeexay habraacyadii ka soo baxay.
Kursiga HOP#067 oo degaan doorashadiisu tahay Galmudug ayaa waxaa ka taagneyd muran xoogan kadib markii musharrixiin uu ka mid yahay Taliyihii hore ee NISA Janeraal Tuuryare ay sheegeen in laga hor istaagay inay u tartamaan.
Waxaa ku soo gabagaboobey xarunta Wasa arada Maaliyadda Puntland ee M/ Garoowe Shir u dhaxeeyay Madaxda Wasaaradda Maaliyadda iyo Bankiga Adduunka , kulanka ayaa ujeedkiisu ahaa sidii loo dul istaagi la haa waxqabadyadii masha ariicda hormarinta hanaan ka Maaliyadda, dib u hab eynta Maamulka Maali yada iyo Cashuuraha Bankiga Adduunku uu ka taageero Wasaaradda Maaliyadda Puntland.
Kulankan, oo socday muddo saddax bari ah aya a la isla eegay guulihii laga gaaray qorsha hawle edka iyo dardar galinta mashuurca PFM/DRM , guulihii/natiijadda la gaaray, sanadkii ugu danbe ey ey, tubtii loo maray iyo tallaabooyinkii la qaa day.
Wasiirka, ayaa Madaxda Bank Adduunka ee Mashaaricda PFM/DRM kula dardaarmay in mashaariicda si toos ah loogu soo hagaajiyo Puntland, madaama ay fashilmeen mashaariicdi la soo marshay DF ee Soomaaliya
Askari ka tirsan ciidamada dowladda oo weer aray garoon kuna dilay dhowr cayaartooy
Wararka naga soo gaaraya G/Gedo ayaa sheegaya in Dorraad gelinkii dambe askari "ka tir san” ciidamada dowladda uu rasaas ku furay dad shacab ah oo xilligaas ku sugnaa garoon lagu ciyaar
ayay kubadda cagta oo ku yaalla gudaha degm ada Beled-xaawo, waxaana ka dhashay khasa are dhima sho leh.Askariga oo ku hubeysnaa qor ay Ak47 ah, isla-markaana ku soc day Mooto Baj aaj ayaa la sheegay inuu tegay ga roonka, xilli ay ka socotay ciyaar, kuna sugn aayeen dadweyn fara badan, wuxuuna kadib ooda uga qaaday rasaas, sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah.
Inta la xaqiijiyey waxaa dhacdadaasi ku dhi ntay ugu yaraan labo wiil oo ka mid ahaa dhal inyarada ciyaartoyda ee degmada Beled-xaawo, waxaana lagu kala magacaabi jiray, Zakariye Axmed Gaarane iyo Sharma’arke Cabdul, sida uu Aadan Cumar Barkhadle u sheegay VOA.
Barkhadle oo ka mid ah waxgaradka Magaal ada ayaa sheegay inuu si bareer ah askarigaasi rasaasta ugu furay ciyaartoyda iyo dadkii kale ee daawanayey ciyaarta xilligaasi socotay.
"Wuxuu ahaa nin orod ku yimid iyo qof dan-leh Bajaaj ku socday Bajaajta marka ay soo ista agtayna qoriga xabadda raacsaday naga leexi la yiri markii naga leexi la yiri meeshii uu ka leexin lahaa dadka qoriga ujeed kasta uu lahaaba rasa astii buu ooda uga qaaday labadaa wiil ayeyna haleeshay siyaabo halis ahna ayey ugu dhacd ay,” ayuu yiri Aadan.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in labada wiil ee geeriyootay ay ahaayeen dhalinyaro aad u firfircoon, isla-markaana si weyn looga yaqa anay deegaanka. "Labada wiil ee ka midka ahaa dhalinyarada ciyaartoyda ee degmada Beled-xaawo weliba kuwooda la oran karo waa ubaxii hadda soo kacaayey oo ugu yar yar laba nin oo maashaa allaah oo firfircoon-bey ahaayeen oo aad u wanaagsan, aad loo jecelyahay,” ayuu raaciyey.
Wararkii ugu dambeeyey ayaa haatan sheega ya in gacanta lagu soo dhigay askariga lagu eed eeyey inuu ka dambeeyey falkaasi, kaas oo isku dayey inuu baxsado, waxaana socda baaritaano dheeri ah oo ku aadan dhacdadaasi ay waxyeela da kasoo gaartay ciyaartoyda.
Si kastaba, lama oga sababta rasmiga ah ee uu askariga u beegsaday garoonka ay xilligaas ciyaarta ka socotay, mana jiro war rasmi ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Gedo.
Muuqaallo sir ah oo muujiyey dalka hubka badan siinaya dowladda ABIY AHMED
lagu qaaday satellite-ka oo ay heshay Al-Jaz eera ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Imaar aadka Carabta ay taageero militari oo baaxad leh siineyso dowladda Ethiopia ee dagaalka kula jirta mucaaradka Tigray-ga.
Baarayaasha hel ay sa wirrada ayaa isha ku hay ey muddo saldhigyo ciid amada cirka ah oo ku yaalla Imaaraadka Carabta iyo Ethiopia, waxay na heleen caddeymaha in ka badan 90 duulim aad oo isaga kala gooshay saldhigga Sweihan ee Abu Dhabi iyo kan Harar Meda ee koonfurta magaalada Addis Ababa, intii u dhaxeysay Sept ember iyo October 2021. Asalka duulimaadyada badankood ayaa la qariyey ama la geliyey diiw aanka duulimaadyo kale oo caadi ah oo aysan laheyn.
Daabulaadda hubka ayaa waxaa qandaraas ku qaatay laba shirkad oo gaar loo leeyahay oo mid laga leeyahay Spain, taasi oo sameysay 50 duulimaad iyo mid laga leeyahay Ukraine oo sa meysay 30, sida ay ogaatay Al-Jazeera.
Ma cadda haddii hubkan ay bixineyso dowla dda Imaaraadka Carabta iyo haddii ay tahay un marin hubka ay marinayaan dowlado kale.
Mid ka mid ah muuqaallada ay heshay Al-Jaz eera oo laga qaaday saldhigga Ethiopia, ayaa muujinaya diyaarad u eg tan Shiinaha ay soo saaraan ee Drone-ka ah ee Wing Loong.
Dowladda Ethiopia ayaa kordhineysay dhow aanahan diyaardaha Drone-ka ee ay ka hesho Shiinaha iyo Turkey, si ay gacan sarreyn uga he sho Tigray-ga. Si kastaba, xannibaad la saaray warbahainta ayaa adkeysay in caddeymo loo helo illaa iminka.
Mareykanka oo soo farageliyay xiisadda u dhaxeysa M/Mulka Puntland &Ciidamada PSF
Waxaa weli M/Boosaaso ee Xarunta G/Bari ka taagan xiisadda u dhaxeeysa Saraakiisha Cii damada PSF-ta Puntland iyo Xukuumadda Puntl and, taas oo ka dhalatay xilka qaadistii Madaxw eyne Deni uu ku sameeyay Agaasimaha Ciidama da PSF Maxamuud Cismaan Diyaano. Ciidamada PSF &Saraakii sho oda ayaa soo baneeyay 7aad kii hore furumaha dagaalka ee duleedka Boosaaso, waxaana ay si cad u she egeen inaysan ka amar qaa dan Madaxweyn aha Maamulka Puntl and Saciid Cabdullaahi Deni. Warar soo baxay ayaa sheegaya in xiisa dda 2da dhinac uu soo farageliyau Mareykanka maadaama uu tababaray, sidoo kalena uu mu shaar siiyo, waxaana la filayaa in saraakiil sare oo ka tir san Taliska Ciidamada Maraykanka ee AFRI COM ay todobaadkan yimaadeen Caasim adda Puntland ee Magaalada Garoowe.
Saraakiisha ayaa waxaa ay marka hore kulan la qaadan doonaan Madaxweyne Deni oo ku sug an Garoowe, waxaana ay u sii gudbi doonaan M/Boosaaso, si ay ula kulmaan Saraakiisha Ciid amada PSF ugalana hadlaan in xaaladda la qa boojiyo si uusan dagaal uga dhicin Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu todobaadkaan tagayo Magaalada Bo os aaso si uu uga qeyb qaato dejinta xiisadda ka dhalatay xilka qaadistii uu ku sameeyay Agaasi maha Ciidamada PSF Maxamuud Cismaan Diyaano.
In kastoo xaaladda Magaalada Boosaaso ay degan tahay ayaa hadana waxaa ku wada sugan Ciidamada PSF,ta Puntland iyo kuwa Madax weyne Saciid C/hi Deni, iyada oo dadka qaar ay sheegayaan inay cabsi soo wajahday.
Warbaahinta dowlada Itoobiya ee Ethiopian Broadcasting Corporation, ayaa baahisay in ma daxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, taa geeray dagaalka ay dowlada dhexe ee Itoobiya kula jirto TPLF.
Warbaahintan oo ka sheekaysay waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxweyne Biixi iyo mad axweynaha Dowlad Deegaanka Somaalida, oo ay ugu mudnaayeen ganacsiga iyo amniga, ayaa dhinaca kale sheegtay in warar ay ka heleen dow lada deegaanku ay u sheegeen in Biixi taageeray howlgalka Abiye wado.
Xukuumada Somaliland iyo ta dowlada deegaanka midna si rasmi ah loogama maqal in wax ku saabsan dagaalka Itoobiya labada mad axweyne ka wada hadleen, isla markaana Somal iland ayaa iyadu sannadihii u danbeeyay ka gab satay dhamaanba dhaq dhaqaaqyada ay wade en madaxda geeska oo uu Abiye ugu horeeyo